बिहे गरेर अमेरिका लैजाने भन्दै दुइ युवतीको अनाैठो ध’न्दा ! – ABC NEWS 24
बिहे गरेर अमेरिका लैजाने भन्दै दुइ युवतीको अनाैठो ध’न्दा !
आफूहरुलाई डिभी परेको र बिहे गरेर अमेरिका लैजाने आश्वासन दिई ठगी गरेको अा’रोपमा दुइ युवती प’क्राउ परेका छन् । महानगरीय अप राध महाशाखाको टोलीले शुक्रबार बाग्लुङ काठे गाउँपालिका–२ घर भइ भक्तपुर बस्ने २७ वर्षीया कोपिला शर्मा र १९ वर्षीया अमिसा केसीलाई निय’न्त्रणमा लिएको हो ।
← नेकपा २०८० सम्म ओली र प्रचण्डले चाहेर पनि पार्टी फुटाउन कानुनले नदिने : यस्तो छ कानुन . .
लाइसेन्सको आवेदन भर्दा किन आइरहेको छ समस्या ? यी बार मात्रै भर्न मिल्छ →